ကျွန်တော့်အဖြစ်မှန်အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြနေတာ တစ်ခါတလေတော့ ရှက်စရာများကောင်းနေသလား စဉ်းစား မိပါတယ်။ အခုလည်း ပြောပြဦးမယ် ကျွန်တော့်အစွဲအလမ်း တစ်ခုအကြောင်း။
ကျွန်တော်အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေကို ဘယ်လိုရူးသွပ်စွာ တပ်မက်မိတယ်ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပေမဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကနေ အခုအရွယ်အထိ အရောင်၊ဒီဇိုင်း၊အသားမျိုးစုံ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေ ၀ယ်တယ် ၀တ်တယ် စုဆောင်းထားတာအများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီဇိုင်းကြိုက်ရင်၊ အရောင်ကြိုက်ရင် ဆင်တူနှစ်ထည်ဝယ်လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ထည် က ၀တ်ဖို့ တစ် ထည်က ဘီရိုကြီးထဲ သိမ်းထားဖို့။ ကျွန်တော် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအမျိုးအစားစုံကို ကြိုက်ပေမဲ့ အဖြူရောင် briefs ဘောင်းဘီကို အထူးနှစ်သက်ပါရဲ့။
အဖြူရောင် Cotton အတွင်းခံကိုဝတ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို မှန် ထဲမှာကြည့်ရင်း ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုကာ -ွင်းထုရ တာကို ငယ်ငယ် လေးကတည်းက မသိမသာ သဘောကျခဲ့တာအခုထိ။ တင်းရင်းပြီး မာတောင်နေတဲ့ ငပဲကို ပျော့ ပြောင်းတဲ့ cotton အတွင်းခံက တစ်ဆင့်မြင်ရတာ ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ် ရှားဖို့ကောင်းလဲ? အမျိုးသားအတွင်းခံ လှလှလေးတွေကို မြင်ရ တိုင်း စိတ်ထဲအလိုလို နိုးကြွနေ တတ်တယ်။ ဘော်ဒီမိုက်မိုက်ငနဲတွေ အတွင်းခံလှလှလေး တွေဝတ်ပြီး ရေကူးနေတာတို့ ၀တ်ဆင်ပြီး ကြော်ငြာထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်း၊ ပိုစတာ တွေကလည်း ကြည့်ရင်း turn-on ကို ဖြစ်စေရော။ အဖြူရောင် ခပ်ပါးပါး ဘောင်းဘီကို တင်းရင်းနေတဲ့ တင်သားများမှာ ချပ်ချပ် ရပ်ရပ်ဝတ်ထားရင် ရှေ့ကလည်း အထုပ်အထည်နှင့် နောက်သားများ ကလည်း ဖောင်းကြွနေတာလေ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
ဘာလဲ? ကျွန်တော့်နာမည်က Alex ပါ။ အသက် ၂၈နှစ်၊ sexual က bi ပါဗျ။ အမှန်တကယ် ပြောရရင်တော့ တစ်ခြား သူစိမ်း ယောက်ျား နှင့် လက်တွေ့ experience မရှိသေးတာ တော့အမှန်။ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိမဲ့သူက ကျွန်တော့်လို underwear သပ်သပ်ရပ်ရပ် သန့်ရှင်း စွာဝတ်ပါ့မလား သံသယဖြစ်နေမိတာကိုး။
မကြာခဏ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေ ကျွန်တော်သွားလေ့ရှိတာမှာ အခု နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမြို့ကြီးတစ်ခုဆီရောက် ရှိနေပါတယ်။ အေးဆေးဆိပ်ငြိမ်တဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတည်းခိုရင်းပေါ့။ ရောက်နေတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ အလုပ်များလည်းပြီး စိတ်ထဲ မှာလည်း တစ်ခုခု လုပ်ချင်လာသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်လိုပဲ underwear တွေအပေါ် ရူးသွပ် တပ်မက်တဲ့သူ တစ်ဦးနှင့် မမျှော်လင့်တဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခံစားမှုတွေ ဖန်တီးခံစား ကြည့်ချင်လာတယ်။ Craigslist မှာ underwear မျိုးစုံ၊ ပို့စ်မျိုး စုံနှင့် ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံများစွာရိုက်ပြီး တင်ဖြစ်တာမှာ Comments တွေများစွာပေးတဲ့ 'ကျော်ကျော်'က ဒီမြို့မှာနေသည်လေ။ အသက် အ ရွယ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့လောက် ပါပဲ။ Underwear ၀တ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ သူ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပို့ ပေးဖူးတယ်။ အဖြူရောင် Fruit of The Loom briefs ဘောင်းဘီ ၀တ်ထားတဲ့ အရမ်းဟော့တ်တဲ့ ဘော်ဒီပိုင်ရှင်ပါပဲ။ သူလည်းပဲ underwear အပေါ်ကြိုက် နှစ်သက်တပ်မက်ခဲ့တာ ငယ်ငယ်လေးကတည်း ကတဲ့။ ခင်မင် တာကြာတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမှ အံ့တောင်သြတယ်။ သူက တခြားဘဲတွေရဲ့ အတွင်းခံကိုယူပြီးအနံ့ရှူကြည့်ရတာ ဖီးလ် အရမ်းလာတယ်တဲ့။ သူကြိုက်မိတဲ့လူရဲ့ အတွင်းခံကိုခိုးယူ၊ အိမ်ခန်းထဲမှာ အဲဒါကိုဝတ်ဆင်ပြီး -ွင်းထုရတာ အရမ်း ကောင်း ဆိုပဲ။ သူကတော့ တခြားအမျိုးသားနှင့် အတွေ့အ ကြုံတစ်ချို့ရှိပါသတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ နက်ဖြန်ညနေ တွေ့ဆုံရ အောင် တည်းခိုရာဟိုတယ်ကို သူလာဖို့စီစဉ်ဖြစ် ကြတယ်။
သူမရောက်ခင်အထိ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကြောက်နေမိသလိုပါ ဘာကိုမှန်းလည်းမသိ။ ရေမိုးချိုး ကျွန်တော့်အကြိုက် Calvin Klein အဖြူ ရောင် briefs ကိုဝတ်ဆင်ထားလိုက်တယ်။ အပေါ်ကတော့ ထသွားထလာ တီရှပ်တစ်ထည်နှင့် ဂျင်း ဘောင်းဘီပေါ့။ တစ်ဒါဇင်ကျော် လောက် ရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းစုံ အရောင်စုံ underwear တွေို့ ခုတင်ပေါ်မှာ ဟိုသည်ဖြန့်ထား လိုက်သလို စားပွဲပေါ်က Laptop မှာလည်း underwear ၀တ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပို့စ် တွေပေးထားကြတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဘွိုင်းတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို slideshow လုပ်ထားလိုက် တယ်။ အခန်းထဲမှာ ဟိုသည် လမ်း လျှောက်ရင်း ပြတင်းကနေ အပြင်ကိုကြည့်ရင်း သူ့အလာကို မျှော်မိရပေါ့။ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီ ထဲမှာ ညီဘွားက မာစပြု နေသလို ဗိုက်ထဲမှာလည်း လိပ်ပြာလေးတွေ ပျံဝဲနေသလို ခံစားရပါရော။
ကျော်ကျော် ...သူနောက်ကျတယ်။ အလုပ်ကအရမ်းဆွဲထားလို့ ကြာနေတာ၊ အလုပ်ကတန်းလာရင် အိုကေမလား? အိမ်ပြန်ပြီး ရေချိုး အ၀တ်လဲဖို့ အဆင်မပြေလို့ဆိုတဲ့ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်လေး ပို့လာတာ။ အိုကေပါသည်လို့ ပြန်ပြီးအ ကြောင်းပြန်လိုက်ရ တယ်။ သူ...သူ ရောက်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် အံ့သြရသလို ကျေလည်းကျေနပ်သွားမိပါရဲ့။ သူက တပ်မတော်အရာရှိ ၀တ်စုံပြည့်ဝတ်ဆင်ထား သည်လေ။ အစိမ်းရင့်ရောင် ယူနီ ဖောင်းမှာ သားရေခါးပတ်ကြီး ကြီးနှင့် ခြေထောက်မှာလည်း boots ခပ်ထူထူစီးလို့ so hot! သူ့ဘွတ် ဖိနပ်ကိုချွတ်ကာ underwear တွေကို မသိ မသာဖြန့်ကျဲထားသော ကုတင်စွန်း ကို တန်းသွားပါရော။ ကျွန်တော့် underpants တွေကို သူတစ်ခု ချင်းအသေ အချာ ကြည့်ကာ တပ်မက်စွာ စစ်ဆေးပါရဲ့။ uniform ဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့ သူ့ပေါင်ကြားဟာ တဖြည်း ဖြည်း တင်းပြီး ဖောင်းလာတာကို သတိထားမိသလို ကျွန်တော်လည်း ထို့အတူဖြစ်နေမိသည်လေ။ ကျွန်တော့် underpants တွေကို ကောက် ယူနမ်းကြည့်ရင်း ဘယ်ဘောင်းဘီကတော့ သူ အကြိုက်ဆုံး ဆိုတာလည်း ပြောသေးတယ်။
နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာ အဆင်သင့်ဖွင့်ထားတဲ့ slide show ကိုအတူတကွကြည့်ကြ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံခြင်း ဆီကို ဝေဖန် လေကန်ကြပေါ့။ အဲဒါကိုကြည့်နေကြရင်း သူ့လက်များဟာ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ဂွဆုံ ကို ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်သလို ကျွန်တော်ကလည်း cotton ယူနီဖောင်း ဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့ သူ့ပေါင်ကြားက ဒုံးပျံကြီးကို စမ်းသပ် ရင်ခုန်ရတာပ။ ထူအမ်းအမ်း သူ့နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာက မေးရိုးခပ် တင်းတင်း အနားသတ်ထားတဲ့ ပါးပြင်မှာ ပါးချိုင့်တွေပေါ်လာ စေရင်း ကျွန်တော့်အနားကပ်ကာ နှုတ်ခမ်းကို နုညံ့စွာနမ်းပါ တယ်။ အမျိုးသားတစ်ယောက်က နမ်း တာ ဘယ်တုန်းကမှ မခံယူဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ထဲက တဖျဉ်း ဖျဉ်းဖြစ်သလို ခံစားရမိပါတယ်။ သန်မာတဲ့ သူ့ လက်မောင်းများက ကိုယ်ခန္ဓာ နှစ်ခုကို ပူးကပ်စေတော့ သူ့ကိုယ်ပူနွေးနွေး၊ သန်မာထူထဲ တဲ့ ရင်အုပ်တွေကို ထိတွေ့ ခံစားမိကြတယ် နှစ်ဦးသား။ သူ့လက် တွေဖြင့် ပိုမိုရစ်နှောင်ရင်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို နည်းနည်းတိုး ပြီးနမ်း တယ်။ မာတောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲဟာ ၀တ်ထားတဲ့ ယူနီ ဖောင်းဘောင်းဘီကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီ ထိနေသေး တာ။
ကျွန်တော်တို့လက်များဟာ တစ်ယောက်ကိုယ်ခန္ဓာတစ် ယောက် စမ်းသပ်လေ့လာကြတာ အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီများပေါ်မှပါ။ အစိမ်းရင့် ရောင် သူ့ယူနီဖောင်းကြယ်သီးများကို ကျွန်တော်က တစ်လုံးခြင်းဖြုတ်တော့ သူက ကျွန်တော့်တီရှပ်ကို ဖယ်ရှား တယ်။ ရင်အုပ်ထူထူ ပေါ်ကို ကျွန်တော်နမ်းတယ်၊ နို့သီးခေါင်း လေးတွေကို လျှာလေးနဲ့ကလိပြီး ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်းစုပ် တယ်လေ။ သူကလည်း ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီက ဇစ်ကိုဖြည်းဖြည်းပွတ်သပ်ရင်း ဖြုတ်တယ်။ သူ့လက်ချောင်းများကို အတွင်းထဲ အသာထိုး သွင်းလိုက်ရင်း မာထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို under pant ပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်တယ်ပေါ့နော်။
ပူနွေးနေတဲ့လျှာဟာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲတိုးဝင်မွှေနှောက်လာခဲ့ သလို သူ့လက်ချောင်းများဟာ ဂျင်းဘောင်းဘီ ခါး အနားသတ် များကို ပွတ်သပ်ဆော့ကစားတယ်။ ပြီးတော့ လက်ချောင်းများကို အတွင်းထဲထိုးထည့်ကာ အတွင်းခံ အနားသားများကို စမ်း သပ်၊ မာထောင်ပြီး ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ အရှေ့ပိုင်းကိုမသိမသာ ပွတ်သပ်သေးရဲ့။ ကျွန်တော်က လည်း အားကျမခံ ယူနီဖောင်း ဆီ ရှေ့ပိုင်းက ဖောင်းပြီး တင်းနေတဲ့ အထုပ်အထည်ကြီးကို ဖျစ်ညှစ်ပွတ်သပ်ကာ နှစ်ဦး သား တပ်မက်မှုအဟုန်မြှင့်ကြပါ သည်။
ဂျင်းဘောင်းဘီကို သူအသာဆွဲချွတ်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတဲ့ ကျွန်တော့် underpant က သူ့ရဲ့စိတ်ကို ပိုမိုနှိုးဆွမိဟန်တူရဲ့ ဂျင်း ဘောင်းဘီကို အောက်ဆွဲချလိုက်တာ ကျွန်တော်ကလည်း ကန်ထုတ်ပြီး အဝေးကို ရောက်စေလိုက်သည်ပေါ့။ သူ့ဘေးမှာ အသာရပ်ရင်း ငြိမ်နေတော့ သူ့လက် ချောင်းများဟာ ဘောင်းဘီကနေ အတင်းရုန်းကန်ထွက်နေ တဲ့ ငပဲကို အပေါ်ကနေ အသာပွတ်သပ်တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို ညှစ်တယ်၊ နောက်တော့ အတံတလျှောက် အထက်အောက် ရှန်တိန်လုပ်တယ်၊ နုနုညံ့ညံ့ရွှေဥတွေကို ဖျစ်ညှစ် တယ်....' အား...အ...ရှီး'။ ကျွန်တော့်ငပဲကနေ အရည်ကြည် တွေထွက်ပြီး ဘောင်းဘီမှာတောင် အစိုကွက်လေးဖြစ်ပေါ်လာသည်အထိ ဖီလင်က ခံစားရပါ့။
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းများဟာလည်း ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီမှ တစ်ဆင့်အတွင်းပိုင်းကိုလျှိုလိုက်ကာ သူ့အတွင်းခံ အနားသတ် များကို ပွတ်သပ်မိပါရဲ့။ မာထောင်နေတဲံ အသားချောင်းကြီးက ကျွန်တော့်ဟာအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့သူ့ ဟာက ပိုရှည်ပြီး တုတ် တယ်လို့ ခံစားရ ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ၊ လည်တိုင် တွေကို အနမ်းချွေနေ တဲ့သူ ခဏရပ်လိုက်ရင်း နောက်ပြန်ဆုတ် အပြုံးပွင့်တွေချွေကာ ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး အိပ်ယာဆီခေါ်ဆောင် သွားပါတော့တယ်။
အိပ်ယာပေါ်မှာ ကျောခင်းရင်း သူ့ဆီလာဖို့ ကျွန်တော့်ကိုဆွဲယူ ခေါ်ဆောင်ပါတယ်။ “ငါ့ကိုယ်ပေါ်ကိုတက်မှောက်ကွာ..အ'
'မင်းကိုယ်လုံးလေငါ့ရင်ခွင်ထဲ လှဲလျောင်းတာ၊ ထိတွေ့ပွတ်သပ်တာကို ခံစားချင်လို့'
အိပ်ယာပေါ်ကိုတွားတက်လိုက်ရင်း သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို အသာ အယာမှောက်ချလှဲလျောင်းလိုက်တာ သူ့ပေါင်ကြားတွေထဲ ကျွန်တော့် ပေါင်တံတွေကရောက်နေရော။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ပါးပြင်တွေကို ပြင်းပြင်းပျပျ ကျွန်တော်နမ်းမိသလို သူ ကလည်း အတွင်းခံထဲ လက်လျှို လျက် ကျွန်တော့်တင်ပါးများကို ပွတ်သပ်ရင်း ဖျစ်ညှစ်တာပေါ့။တစ်ယောက်ငပဲ တစ်ယောက်ဟာ underwear ဘောင်းဘီသားတွေကို ကြားခံလျက် ထိ တွေ့ရင်း သာယာမိနေကြတာ ခဏ။ သူ့ခရေ၀ရှိရာနားမှန်းလျက် ထောက်ကာ ကျွန်တော့်ပေါင်တွေကို အားပြုရင်း အသာဆောင့်ဖိ မိပါရဲ့။စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ သူ့လက်များဟာလည်း ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးကြားကလျက်လျှိုထားရင်း ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ၊ တောင်ကြားလမ်းကလေးတွေ၊ ခရေပေါက်လေးတွေကို တို့ထိ ကလိတာဗျ။ နှစ်ဦးသားပစ္စည်းတွေ အစွမ်းကုန် မာတောင်လာ ကြသလို ပါးစပ်ကလည်း ညည်းတွားသံလေးတွေ ကိုယ်စီ ရှူး ရှူးရှားရှားဖြစ်ကြပါရော။
သူ့ကိုယ်ပေါ်က အသာလှိမ့်ချလိုက်တော့ အသာမတ်တပ်ထရပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ခါးပတ်ခေါင်းတွေ အသာ ဖြုတ်၊ ဘောင်းဘီဇစ် ကို ညင်သာစွာဖွင့်၊ စစ်စိမ်းရောင် ဘောင်းဘီကို အောက်နားလျှော့ချလိုက်စဉ်မှာတော့ အဖြူရောင် FTL အတွင်း ခံက အထုပ်အထည်ဖြင့် ရင်ခုန်ဖွယ်မြင်ရပါပြီ။ လည်ချောင်းထဲ 'ဂလု' မြည်အောင် တံတွေးကိုမျိုချရင်း ခဏ တော့ ငေးမိပါရဲ့။ 'ဘော်ဒါ, you look so hot in your underpants' လွှတ်ကနဲ ညည်းတွားဖြစ်ရတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းရာထင်းနေသော သူ့ အတွင်းခံပေါ်ကနေ ကွမ်းသီးခေါင်းလေး၊ တုတ်ခိုင် သော အတံတလျှောက်၊ ၀ိုင်းစက်ဖောင်းတင်းနေသော ရွှေဥတွေကို အသာ အယာ ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်မိပါရော။ သူကျွန်တော့်ပခုံးတွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်လိုက်ရင်းမှ မတ်တပ်ရပ်စေကာ ကျွန်တော့်ကို သန်မာသောလက်မောင်းများဖြင့် ဖက်တွယ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်လည်တိုင်တွေ နှုတ်ခမ်းတွေကို နုညံ့တဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းသားများဖြင့် ပြင်းပြင်းပျပျ နောက်တစ်ကြိမ်နမ်းပါတယ်။ နှစ်ဦး သား လက်တွေဟာ တစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ယောက် စမ်း သပ်ကြတာ နေရာအနှံ့ပေါ့။ နံရံမှာကပ်ထားတဲ့ မှန်ချပ်ကြီးတွေမှာ ကျွန်တော် တို့နှစ်ယောက် ရင်ဘတ်ခြင်းအပ် အဖြူရောင် အတွင်းခံကိုယ်စီဖြင့် တစ်ယောက် တင်ပါးတစ်ယောက်ပွတ်သပ် နေတာ မြင်ရပါရဲ့။
ကျော်ကျော်က ခုတင်ရှိရာကို နောက်ပြန်ဆုတ်စေရင်း ထိုင်ခိုင်းတာကြောင့် ခုတင်ပေါ် အသာထိုင်ရင်း ခြေထောက် တွေကို ကြမ်းပြင် ပေါ်ချထားလိုက်တယ်။ သူ့အပြောအတိုင်း ထိုင်ချလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများကို စိုက်ကြည့်ရင်း ကားထားတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်တံ များကြား သူဒူးထောက်လိုက်ကာ ဗိုက်သားလေးတွေ ပေါင်တံတွေ ပြီးတော့ CKဘောင်းဘီအနားသက်များ ကို လက်ချောင်းလေးနှင့် တို့ထိတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူဖြင့် ကျွန်တော့်ဆီးစပ်၊ နောက်တော့ တင်းပြီးမာနေတဲ့ ကျွန်တော့် ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းတွေကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ တစ်ချက်ခြင်းနမ်းတယ်။ ပူနွေးနေတဲ့လျှာဖြင့် -ိင်တံတလျှောက် ပြီးတော့ ရွှေဥတွေကို တစ်လုံးခြင်းဝေ့၀ိုက်ဆော့ ကစားတာ မိနစ်အနည်းငယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘောင်းဘီကို အသာဟကာ ရွှေဥတွေကို ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲ ငုံစုပ်တာမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဟိုးအမြင့်ရောက်သလို ခံစားရကာ ပါးစပ်ကလည်း ညည်းတွားမိပြီပေါ့။ ရုတ်တရက် သူပြုစုနေတာကို ရပ်လိုက် ရင်း မတ်တပ်ရပ်ကာ အပြုံးဖြင့်ပြောတာက 'ငါသိတယ် မင်းမပြီး ချင်သေးဘူး ဟုတ်တယ်ဟုတ်? အနားယူချိန်ပေးမယ်' တဲ့လေ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ သူမိနစ်အနည်းငယ်လှဲလျောင်းနေတော့ တုန်ခါနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံနှင့် မာတောင်နေတဲ့ ငပဲက ခဏငြိမ်ပေးရ တော့တာပ။
ကျွန်တော့်ဘေးမှာ တစောင်းလှဲနေသော သူ့ကိုယ်ခန္ဓာဘက်ကို ကျွန်တော်လှဲ့လိုက်ရင်း ရင်အုပ်ထွားထွားတွေကို နမ်း လိုက် တယ်။ ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကို သူ့ပေါင်တံတွေကြားယှက်နွယ်လိုက်ရင်း တောင်ကြားလမ်းထဲ ညီဘွားကို ဖိမြှုပ်ထားလိုက် တာပေါ့။ ကျွန်တော့် လျှာကို အသာထုတ်ရင်း သူ့ရင်အုပ်တွေ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိလိုက် သွားလေးဖြင့် ဖိလိုက်လုပ် တော့ သူကြက်သီး တွေထလာတာဗျ။ ခဏနေတော့ သူ ကျွန်တော့်ဘက်ကို မျက်နှာမူလိုက် ကာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ပါရော။ နှစ်ဦးသားအနမ်းတွေက မွတ်သိပ်တပ်မက်စွာ ရင်ခုန်သံတွေက အနီးကပ်ကြားရရင်း ဖက်တွယ်ထားကြရတဲ့ ဖီလင်ကို ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တယ်။ သန်မာ တဲ့သူ့လက် ချောင်းများဟာ ကျွန်တော့် ပေါင်ကြားဆီရောက်လာပြီး ညီဘွား ကို ပွတ်သပ်သလို ကျွန်တော်ကလည်း တုတ်တုတ်ထွား ထွား သူ့ပစ္စည်း ကြီးကို တစ်ပြိုင်တည်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။
'ကျော်ကျော် ခင်ဗျား ဒစ်အကြီးကြီးကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ကိုင်ရတာ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာ'
နှစ်ယောက်သား အိပ်ယာပေါ်လှဲလိုက်ကာ အပြန်အလှန်ထုပေး ဖြစ်ကြပါတယ်။ ခဏအကြာမှာတော့ သူထုပေးနေတာကို ရပ် လိုက်ရင်း လက်များဟာ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်များဆီရွှေ့တော့ တာ။သူ့လက်များဟာ ဘာကြောင့် အဲဒီလောက် ညင်သာနူးညံ့ နေရတာလဲ မသိပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေကို တထိတ် ထိတ်နှင့် တိုး၍ခုန်စေပါ၏။ ကျွန်တော့်ရင်အုပ် များ..... ကျွန်တော့်ဝမ်းဗိုက်သားများ......အဲဒီမှ တစ်ဆင့် ၀တ်ဆင်ထား တဲ့ CK ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုလိုက်ကာ ဖောင်း ကားနေတဲ့ -ိင် တံနှင့် ရွှေဥများကို ပွတ်သပ်ပါရော။ သူ့လက်မနှင့် လက်ခ လယ်တို့ဟာ ကျွန်တော့်မှိုပွင့် ပြီးတော့ အတံ တစ်လျှောက်နှင့် ရွှေဥတွေကို ထိခပ်တာ ဖျစ်ညှစ်တာဗျ။
'တစ်ချို့တွေက အတံရှည်ပြီး တုတ်ရင် ဥတွေကသေးတတ် သလို၊ ဥတွေကြီးရင် အတံကသေးတတ်ကြတာ။ မင်းကတော့ အညီအမျှ ပဲကွ.....မိုက်တယ်'
ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုထားတဲ့လက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်မေးကိုထိန်းကိုင်ကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းများကို ကြမ်းတမ်းစွာ နမ်းပါတော့တယ်။ နှုတ်ခမ်းပါးများဟာ သူ့ နှုတ်ခမ်းထူထူတွေထဲ မြှုပ်ကရော။
ကျော်ကျော်...သူ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ကို ကားယားခွလိုက်ရင်း သူ့အထုပ်အထည်ကို မျက်နှာနား မထိတထိဖြစ် အောင်လုပ်တာ ရွှေဥ တွေနှင့်။ မျက်လုံးများကိုကြည့်လိုက်တော့ တစ်ခုခု လုပ်စေချင်ဟန်အထာ။ ဒါကြောင့် အနံ့ တစ်မျိုးရနေတဲ့ သူ့ ဘောင်းဘီ ကိုအသာဟ လိုက်ရင်း သူကျွန်တော့်ကိုစုပ်ပေးခဲ့ သလို ရွှေဥနှစ်လုံးကို ပါးစပ်ကိုအသာ ဟကာ ငုံစုပ်လိုက်ပါ တယ်။ နောက်တော့ တစ်လုံးခြင်းငုံစုပ်ပြီး ကစားတဲ့အခါမှာ တော့ သူ့ခြေထောက်တွေ တဆတ် ဆတ်တုန်ကာ အိပ်ယာ ပေါ်လှဲချလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ ပေါင်ခြံဆီခပ်ကုန်းကုန်းလုပ်ကာ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးကြား ပြူတစ်နေတဲ့ -ီးကို နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် တို့ထိနမ်း၊ လျှာဖျားလေး ဖြင့် ကွမ်းသီး ခေါင်းလေးကို ရစ်ကာ ၀ိုက်ကာဖြင့် 'ရှလွတ်' မြည်အောင် စုပ်ယူလိုက်ပါရော ပါးစပ်ထဲကို။ သံခမောက်လေး မှောက်ထားသလို လုံးဝန်း နေတဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းကို အသာငုံ ရင်း တပြွတ်ပြွတ်စုပ်မိတော့ သူ့ပစ္စည်းက ပိုပိုထွားလာသလား ထင်ရ ပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှား နေတဲ့ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို သူ့လက်အစုံဖြင့် ထိန်းကိုင်ရင်း ဆံနွယ်တွေကို ပွတ်သပ်လိုက် တစ်ချက် တစ်ချက် ဖိတွန်းရင်း သူ့ငပဲကို အဆုံးထိလည်ချောင်းထဲရောက်အောင် သွင်းစေလိုက်နဲ့ပေါ့နော်။
'Stop! Stop! Alexငါထွက်တော့မယ်။ ငါလည်းမပြီးခင်သေး ဘူးကွ။ Wow! မင်းအတော်တော်တဲ့ Cocksucker ပဲ Alex'
'Ok ငါ့ကောင် မင်းကောင်လေးကို နည်းနည်းငြိမ်ခွင့်ပေးလိုက် ပါ့မယ်'
ကျွန်တော့်မှာ အနေအထားနည်းနည်းပြောင်းရတာမှာ ရင်ခုန် နေမိပြန်ရော။ နံဘေးကိုစောင်းပြီးကွေးထားတဲ့ ကျော်ကျော့် ဘောင်းဘီ နောက်ပိုင်းက တောင်ကြားလမ်းလေးကို မြင်ရချိန် မှာလေ။ အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်လိုက်ဖက် စွာ တစ်ရစ်နေတဲ့ သူ့တင်သားများဟာ မြင်နေရယုံဖြင့် အတော်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းပါရဲ့။ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုး လေးတွေ တောင်ကြား လမ်းလေးတွေ ဖျစ်ညှစ်လိုက်ရင် အိအိ သွားတဲ့ တင်သားတွေ ကို ကျွန်တော် ရွရွလေး ပွတ်သပ် မိပါတယ် နှစ်ခြိုက်စွာ။ ဖောင်း နေတဲ့ တင်သားများကို လက်ဖ၀ါးလေးနှင့် ပွတ် သပ်ရင်း ခပ် ဆတ်ဆတ် နှစ်ချက် သုံးချက်ရိုက်လိုက်တော့ တုန်ခါသွားသလို ကျွန်တော့်ရင်ခုန် သံတွေဟာ ဗုံတစ်လုံးလို ခုန်တယ် မြည်ဟည်း ပါတော့ တယ်။ အတန်ကြာ ပွတ်သပ်နေမိရင်း သူ့ကိုအိပ်ယာ ပေါ်အသာ လှဲ ခေါင်းအုံးကို ခါး အောက်မှာ ခပ်မြင့်မြင့်ခုပေး စေလိုက် တော့ သူ့တင်သားတွေက အပေါ်မြှောက်ကာ ခရေပွင့်လေး အာသွားဖို့ အသင့် ဖြစ်ရော။
သူ့ခြေထောက်တွေကို ကျွန်တော့်ပခုံးမှာတင် ဘောင်းဘီကို အသာမတင်လိုက်ရင်း ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ ခရေ၀ဆီ ကျွန်တော့် ငပဲကို ချိန်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။ သူက ခဏရပ်ဖို့ အသာတား လိုက်ကာ condom ကိုယူပြီး စွပ်ပေးပြီးမှ သူ့ ခရေ၀ဆီပြန်ပြီး တေ့ကာ သွင်းစေ ပါတယ်။ တင်းပြီးကြပ်နေတဲ့ ခရေ၀ထဲ တစ် ထစ်ခြင်းဖိဖိသွင်းရတာ အတော်ကောင်း ပါ့။ အဆုံးထိအောင် ဖိကပ်လိုက်ရင်း ခပ်ဖြေးဖြေး ဆောင့်တာ ခဏပါပဲ။ အချိန်လေး ကြာလာတော့ အရှိန်မြှင့်ပြီး ဆောင့် မိပါရဲ့။ အရမ်းကောင်း တာ ပဲဗျာ.....'အ...အား....အ...ရှီး'။ အိုး... climax ရောက်ဖို့ အဆုံး သတ်ဖို့ အချိန်မရောက် သေးဘူးလို့ သတိထားကာ -ီးကိုပြန် နှုတ်ရင်း အိပ်ယာပေါ်မောလျစွာ ပြန်လှဲလိုက် ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ သူ့အလှည့်ပေါ့နော်။ သူ့လက်များဟာ ဘောင်းဘီခါး မျှော့ကြိုးကို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေအောက်ခြေနားအထိ ဆွဲချ လိုက်ရင်း အစွမ်းကုန် မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အားရတပ်မက်စွာ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် နားရွက်လေးတွေ လည်တိုင်တွေ ရင်အုပ်တွေကို သူနမ်းတယ်။
ကျွန်တော်သည်လည်း သူ့ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကို သူ့ရွှေဥတွေ အောက်ရောက်သည်အထိ ဆွဲချလိုက်ရင်း ကြည့်မိ လိုက်တယ်။ Shit! သူ-ီးဟာ ကျွန်တော့်ဆီအမြှောက်နဲ့ချိန်ထားသလိုပါပဲ။ တုတ်လည်းတုတ်တယ်၊ ရှည်ကလည်းရှည်၊ ကွမ်းသီးခေါင်းက လည်း ပြောင်ပြီး တင်းနေရော။ နှစ်ဦးသား -ီးတွေကို ချောဆီ များများ သုတ်လိမ်းလိုက်ကြရင်း ပူးကပ် လိုက်ကာ လိင်ဆက် ဆံသလို တင်ပါးများကို ပြိုင် တူလှုပ်ရှားရင်း သနပ်ခါးသွေး ကြပါတယ်။
အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့ ရင်ခုန်သံများဟာ ဆိတ်ငြိမ်နေတဲ့ အ ခန်းထဲ ကျယ်လောင်လာသယောင်ခံစားရပါတယ်။ လက် အစုံ ဟာလည်း အပြန်အလှန် ပွေ့ဖက်ထားကြတာ တင်းကျပ်လို့ပါ။ နှုတ်ခမ်းသားများဟာလည်း သော့ခတ်သည့် အလား တပ်မက် စွာ။ ရုတ်တရက် သူ့ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးကြားကနေ ငပဲကြီး ကို ထုတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ရဲ့ တင်း ကျပ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီ မျော့ကြိုးကြားမှတစ်ဆင့် အတွင်း ထဲကို ထိုးထည့်လိုက်ပါ တယ်။ မျှော့ကြိုးကြောင့်ရော မာထောင်နေတဲ့ -ီးများကြောင့် ရော နှစ်ဦးသား-ိင်တံများဟာဘောင်းဘီတစ်ခုတည်း ပူးကပ် ချည်နှောင်ထား သလိုဖြစ်နေ ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်များ ဟာ သူ့ခါးကိုချိတ်တွယ်ထားရင်း လက်အစုံကတော့ ကျယ်ပြန့် တဲ့ ကျောပြင်ကို ဖက်တွယ်ထားမိပါတယ်။ သူကလည်း ခါးကို ခပ်ရွရွလှုပ်ရှားရင်း ဆောင့်-ိုးပါတော့တယ်။ ပူနွေးနေတဲ့ အသား ချောင်းကြီး ဟာ ချောဆီကြောင့် ချောမွတ်စွာကျွန်တော့် ဘောင်းဘီထဲ တိုးတိုးဝင်လာရင်း ကျွန်တော့်ညီဘွားကို ပွတ် သပ်နေတာ ကြောင့် ဖီးလ်.... .မခံစား ဖူးတဲ့ ဖီးလ်တစ်ခုကို အရှိန်အဟုန်မြင့်စွာခံစားရပါရော။ သူ့တင်ပါးအစုံကို လက်ဖြင့် ဖိကိုင် လိုက်ရင်း ဆွဲဆွဲပြီးး ဆောင့်စေတော့ သူလည်း အားရစွာ ဆောင့်ရင်း အသက်ရှူသံများဟာ ပြင်းသထက်ပြင်းထန်လာပါ တယ်။
ကျယ်လောင်တဲ့ အော်ညည်းသံတွေ အထိန်းအကွပ်မဲ့ ထွက်ပေါ် လာပြီးနောက် ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီထဲ ချောကလက်ရည် ပူပူ နွေးနွေး တွေ ပန်းထည့်လိုက်ပါတယ် သူ့တင်ပါးတွေ တဆတ် ဆတ်တုန်ရင်းပေါ့။ သူ့အသံ၊ သူ့မျက်နှာ၊ ပူနွေး နေတဲ့ အထိ အတွေ့များကြောင့် ကျွန်တော်သည်လည်း မရှေ့မနှောင်း အဆုံးစွန်ခံစားမှုကို တက်မက်စွာ ရရှိလိုက်ပါ တယ်။ ထိုးသွင်း ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ ပြင်းထန်တဲ့ ပွတ် သပ်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ခံစားမှုအရသာရှိရှိကို ဒီတစ်ကြိမ်မှ ခံစား ရမိတာပါပဲ။ နှစ်ဦး သားရဲ့ ပူနွေးနေတဲ့အရည်ပျစ်တွေဟာ ရောနှော လျက် ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကတစ်ဆင့် ဗိုက်သား ပေါ်မှာ အများ အပြား။
မိန်းမောနေတဲ့အချိန်ခဏအပြီးမှာတော့ တစ်ဦးလက်မောင်း တွေထဲ တစ်ယောက်ခိုဝင်ဖက်တွယ်ထားကြရင်း အနမ်းတွေ ဖလှယ်ဖြစ်ကြ တာ စိုစွတ်နေတဲ့ underwear များဖြင့်ပေါ့။
သူပြန်သွားချိန်မှာတော့ စိုစွတ်ဆဲ ကျွန်တော့် underpant ကို အမှတ်တရ သူယူသွားသလို ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ ဘောင်း ဘီကို ယူထား လိုက်ပါတယ်။ နောက်နေ့ အလုပ် meeting အ တွက် business clothes ကိုဝတ်ရတော့ အဲဒီ ဘောင်းဘီကို အောက်ကခံပြီး ကျွန်တော် ၀တ်သွားတယ်။ တစ်နေ့လုံး ပေါင် ကြားက ညီဘွားက မာနေသလို၊ သူ့ အကြောင်း သူနဲ့အတူ တကွဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ စိတ်ထဲတမ်းတနေမိပါ၏။ နောက် တစ်ခါ FTL brand အတွင်းခံတွေမြင် ရတဲ့အခါ၊ ဘောင်းဘီ ခပ်လျော့လျော့ ၀တ်လို့ နောက်ဖက်က တောင်ကြားလမ်းလေး ပေါ်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေကို မြင် တဲ့အခါတွေမှာ ကျွန်တော်. ...ကျွန်တော်ရင်ခုန်နေတော့မှာ.....။
Same as me!!!!, love that